Codsiyada iPhone | Wararka IPhone
Dukaanka App waxaa ku yaal kumanaan codsi waana mid aad u adag in la helo mid ku habboon waxa aad raadineyso haddii aadan magaceeda aqoon. Actualidad iPhone ayaan maalin walba ku bari doonaa codsiyada ugu fiican waxaa loo sii daayay telefoonka Apple. Waxaan sidoo kale kuu ogaan doonnaa barnaamijyo xiiso leh iyo barnaamijyo cusub oo adiga loogu talagalay si aad marwalba ula yaabto isticmaalka aad siin karto iPhone-kaaga. The falanqaynta iyo dib u eegista waxay ku sii socon doonaan qoto dheer si aad u ogaato dhammaan fursadaha arjiga.
Bilow inaad soo dejiso codsiyada iPhone-kaaga
Haddii aad xoogaa lumisay oo aad ku cusub tahay App Store, halkan waxaa ah barnaamijyada ugu fiican ee bilaashka ah iyo kuwa lacag bixinta ah ee aad kala soo bixi karto iPhone-kaaga.
Xulashada kore, waxaad heli doontaa ka buuxi iPhone-gaaga codsiyada cusub oo xiiso leh.
Waxaad hadda ku ciyaari kartaa Fortnite iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga mahadsanid GeForce Hadda
by louis padilla samee Miinooyinka 26 .
Kadib bilo badan oo ka maqnaa aaladaha Apple, Fortnite waxay ku soo noqotaa iPhone iyo iPad. Waa mahadsantahay...
Apple waxay u ogolaan doontaa horumariyayaashu inay kor u qaadaan qiimaha isdiiwaangelinta iyaga oo leh xad
by Kariim Hmeidan samee 4 maalmood .
Horay waanu u illownay laakiin dhawr sano ka hor ma jirin App Store ama dukaan app ah. Maanta…
WhatsApp waxay kuu ogolaan doontaa inaad ka baxdo kooxaha adoon ogeysiin isticmaalayaasha kale
by Angel Gonzalez samee 4 maalmood .
Maalmo ka hor waxaan ogaanay in WhatsApp ay ku dartay filtarrada raadinta nooca beta ee codsigeeda...
Luuqadaha ka baro meel kasta iyo xawligaaga adigoo isticmaalaya italki
by Qolka Ignatius samee 4 maalmood .
Qofna ma dafiri karo in Ingiriisku uu waligiis ahaa luqadda caalamiga ah, luqad aad ku fahmi karto naftaada.
WhatsApp waxay bilawday tijaabinta filtarrada raadinta beta-keeda
by Angel Gonzalez samee 1 toddobaad .
WhatsApp betas si joogto ah ayaa loo cusboonaysiiyaa. Dhowr toddobaad ka hor ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Jaaliyadaha, qodob ka mid ah…
NapBot ee Apple Watch waa la cusboonaysiiyay iyadoo lagu daray falanqaynta apnea hurdada
by Kariim Hmeidan samee Toddobaadyada 2 .
Wax badan ayaa laga sheegay suurtogalnimada aan u isticmaalno aaladaha sida Apple Watch si aan ula soconno sida…
Telegram-ku waxa uu ku dari karaa hawlo gaar ah oo hoos yimaada is-diiwaangelinta Premium
Codsiyada fariimaha ayaa ah rootiga maalinlaha ah ee qalabkayaga. Waxaa isa soo taraya inay yihiin shay...
WhatsApp ayaa dhawaan kuu ogolaan doonta inaad aragto heerarka ku jira saxanka sheekeysiga
by Angel Gonzalez samee Toddobaadyada 3 .
Mashiinada WhatsApp waa ka badan saliidda. Sheekooyinka cusub ayaa sii socda bilba bil ka danbeyse dhamaantood waa isku mid...
Sida loo galo 1Password 8 beta dadweynaha ee iPhone ama iPadka
by Angel Gonzalez samee 1 bishii .
Shalay oo kaliya waxaan kuu sheegnay in 1Password uu soo saaray casriyeynta ugu weyn ee aaladiisa ilaa maanta. Waxay ku saabsan tahay…
Cusbooneysiinta 1Password 8 ee cajiibka ah ayaa hadda laga heli karaa beta dadweynaha
Ammaanka akoonnadayada ayaa lama huraan u ah waayo-aragnimada isticmaaleyaasheenna si ay u noqoto mid cajiib ah. Si loo wanaajiyo khibradaas…
Maxaa ka cusub WhatsApp: Bulshooyinka, faylasha ilaa 2 GB iyo in ka badan
WhatsApp waa mid ka mid ah codsiyada loogu isticmaalka badan yahay maalin kasta inta badan isticmaalayaasha. Bilihii la soo dhaafay ayaa…
Ka ilaali WhatsApp inaad keydiso sawirada iyo fiidiyowyadaada
Dhammaan wixii ku saabsan baloogyada ku yaal Telegram
Sida WhatsApp loogu helo Apple Watch
Sida loo ogaado cidda iga raacday barta Instagram
Barnaamijka Pordede (hadda waa Plusdede) ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo galay App Store
Sida loogu daro sawirada iyo fiidiyowyada shaashadda sheekadeena Instagram
Ciyaaraha ugufiican App Store
Sida loo diro heesaha ama loo keydiyo kuwii laga helay WhatsApp
Sida loogu soo dejiyo fiidiyowyada Facebook-ga iPhone
Sida loogu wareejiyo fiidiyowga iPhone
Sida Loogu Beddelo Fiidiyowyada YouTube-ka looguna beddelo Mp3 iyaga oo wata iPhone
8-da barnaamij ee ugu fiican ee loogu talagalay iPhone-ka
"Hey Siri" adiga kuu shaqeyn maayo? Isku day xalalkan
Chick faraxsan, emulator-ka-All-ka ah ee macruufka iyo Android ka aad jeceshahay. [Casharrada rakibaadda]
Ku rakib (dildilaac) codsiyada qaab .ipa ah
Ku hel Afterlight bilaash abka barnaamijka Apple Store. Waxaan ku tusaynaa sida
Shaqo-socod: Waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo maxaan ku qaban karaa